Deggarsi lammiilee hongeef saaxilamaniif taasifamaa jiru baay'ina namoota waliin walgitaa hinjiru
Deggarsi lammiilee hongeef saaxilamaniif taasifamaa jiru baay'ina namoota waliin walgitaa hinjiru Featured
Aadde Sakkee Dhaddachaa jedhamu. Yeroo ammaa bakka waggoota dheeraadhaaf jiraachaa turan irraa sababa hongeefi walitti bu'iinsa daangaa Somaaleetti uumameen Godina Gujii bakka Bishaan Kuraa jedhamurraa gara Aanaa Gumii Eldallootti baqatanii jiraachaa jiru.
Aaddee Sakkeen akka jedhanitti, qabeenya looniifi kanneen biroo ittiin jiraachaa turan achumatti gatanii lubbuusaaniifi ijoolleesaanii baraaruudhaaf gara iddoo eerameetti erga baqatanii ji'a tokko ni ta'a. Deggersi bakka itti baqatan kanatti isaaniif taasifamaa jiru gahaa waan hintaaneef maatiisaanii kan walgahu miti. Midhaanuma haala kanaan argatan waan ittiin daaksifatan waan hinqabneef affeelliifi akaayiisaa nyaachuuf kan dirqaman ta'uufi kun ammoo keessumaa daa'immaniif rakkoo guddaa akka ta'e dubbatu.
Midhaan nyaataa caalaa rakkoon guddaan isaan mudachaa jiru hanqina bishaanii ta'uu kan himan Aadde Makkoo Gadaa, midhaan gargaarsaan argatan affeellatanii nyaachuudhaafis ta'ee akaawwii nyaatanii wanta irratti dhugan dhabuurraa kan ka'e miidhaan guddaan isaanirra gahaa jira. Bishaan dhugaatii torbanitti konkolaataa bootteetiin isaaniif raabsamaa jiraachuufi bishaan raabsamu baay'ina hawaasa naannawichaa wajjin walbira qabamee yammuu ilaalamu baay'ee xiqqadha jedhu.
Hogganaan Waajjira Hoggansa Sodaa Balaa Aanaa Gumii Eldalloo Obbo Sayidoo Godaanaa akka jedhanitti, hanqina roobaa waggoota lamaan darban mudateen aanichi yeroo ammaa rakkoo hongee hamaaf saaxilamee jira. Jireenyi hawaasa aanichaa guutummaatti horsiisa looniirratti kan hundaaa'e ta'uufi loowwan yeroo ammaa hanqina nyaataafi bishaaniitiin miidhamaa jiraachuun dhimmichi akka ulfaatu taasiseera.
Keessumaa daa'immaniifi dubartootni balaa hongee kanaan daran miidhamaa jiraachuu kan himan Obbo Sayidoon, deggarsi mootummaan namoota balaa hongeef saaxilamaniif taasisaa jirus baay'ina namoota deeggarsa barbaadanii waliin kan walgitu akka hintaane dubbatu.
Akka aanichaatti, barana qofa loowwan kuma 24 ol sababa hongee kanaan dhumuusaanii himanii, mootumaan lakkoofsa loowwan sababa balaa hongeetiin dhumaa jiranii hir'isuudhaaf deggarsa nyaata loonii taasisaa jiru cimsee kan itti fufu ta'a. Dhiyeessii nyaata loonii kanaan dura taasifamaa ture gahaa ta'uu baatuus hanga tokko balaa hongee mudate akka dandammatan taasiseera.
Ogganaan Hoggansa Sodaa Balaa Godina Gujii Obbo Ababaa Abbaa Bulguu akka jedhanitti, aanaalee godinichaa shan sababa hongeetiin rakkoo cimaa keessa jiran keessaa Aanaan Gumii Eldalloo ishee tokko. Gandoota shanan aanichaa keessa namootni kuma 48 ol kan jiraatan yoo ta'u, yeroo ammaa sababa hongee mudateen rakkoo nyaataaf saaxilamanii jiru. Gandootni godinichaa 58 ta'an yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa galuusaanii dubbatu.
Mootummaan rakkoo gama kanaan hawaasa godinichaarra gahaa jiru salphisuudhaaf deggarsa bifa garaagaraatiin eegale cimsee kan itti fufu ta'uu himanii, deeggarsi taasifamaa jiru gahaa waan hintaaneef haalli deeggarsi kun quubsaa itti ta'u uumamuu akka qabu ni ibsu.
Walumaagalatti, rakkoon sababa hongeetiin yeroo ammaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti uumame kun lubbuu namootaafi qabeenya beeyladaa irratti balaa caalu akka hinqaqqabsiifneef deggarsi mootummaan taasisaa jiru akkuma jirutti ta'ee, keessattuu naannolee gammoojjii horsiisa loonii irratti bobba'anitti yeroodhaa gara yerootti baay'inni namoota deggarsa barbaadanii dabalaa waan jiruuf deeggarsi taasifamaa jiru baay'ina namoota deggarsa barbaadan waliin kan walgitu akka ta'uuf dhimma xiyyeeffannoon irratti hojjatamuu qabuudha.
Torban kana/This_Week 17685
Guyyaa mara/All_Days 1442465